यस्तो छ आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाको पहिलो नजिर, फैसला कस्तो भयो ? -
यस्तो छ आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाको पहिलो नजिर, फैसला कस्तो भयो ?
९ भाद्र २०७६, सोमबार ०१:३२ Tamakoshi SandeshLeaveaComment on यस्तो छ आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाको पहिलो नजिर, फैसला कस्तो भयो ?
आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन मुद्दामा गत असारमा पहिलो फैसला भएको छ। जसमा अभियुक्तलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले आंशिक दोषी ठहर गरेको छ।
गत २६ असार मा भएको फैसलामा जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासले रामेछाप मन्थली घर भएका २४ वर्षीय डोरबहादुर श्रेष्ठलाई आंशिक दोषी भन्दै पाँच महिना कैद, हजार रुपैयाँ जरिवाना र ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला दिएको थियो।
काठमाडौं–१६ माछापोखरी बस्ने उनकी श्रीमती कविता श्रेष्ठले २६ माघमा आफ्नै डेराको शौचालयमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन् । माइती पक्षले हत्या भएको भन्दै ज्वाइँविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा आत्महत्या नै भएको, तर डोरबहादुरले आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको भन्दै २२ फागुन ०७५ मा मुद्दा दायर गरिएको थियो । सुरुमा डोरबहादुरलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएको थियो।
डोरबहादुर र कविताले ०७२ मा प्रेमविवाह गरेका थिए । विवाहको केही महिनापछि नै आफूहरूबीच विवाद हुने गरेको अभियुक्तले समेत बयानमा स्विकारेका थिए। त्यसलाई समेत अदालतले आधार बनाएर फैसला गरेको थियो । उनीहरूको सात महिनाको बच्चासमेत छ। बच्चालाई ५० हजार क्षतिपूर्ति दिन अदालतले भनेको छ ।
आज ०७६ भाद्र ९, कुनै शुभकार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने हेनुहोस राशिफल
चितवन प्रशासनको कडा आदेश, पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने
नाथमले शैक्षिक र व्यवसायको सम्बन्धबारे छलफल
१५ माघ २०७६, बुधबार १०:४६ Tamakoshi Sandesh
२ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०३:२८ Tamakoshi Sandesh
९ भाद्र २०७८, बुधबार १२:३२ Tamakoshi Sandesh